Zifa ngamvunye – Buza Noma Yini
Solved851 views July 6, 2021 ulimi LwesiZulu
Donovan (anonymous)	 July 6, 2021 0 Comments
Incazelo yalapha please, ngabe isaga noma isisho?
Anonymous	 Posted July 6, 2021	 0 Comments
UKUFA – Lapha kukhulunywa ngokuhlukana komphefumulo nenyama phecelezi ukuphangalala.
Lapha kukhulunywa ngezimvu. Imvu isilwane esinemlenze emine esilanganiselwa embuzini ngobude nobukhulu sidle ngokuba yimvukumvuku ngenxa yoboya baso obuningi futhi obuhlukile kunoboya obujwayelekile. Ngicela ubuke umfanekiso obekiwe ukuze uyiqonde imvu ukuthi isilwabe esinjani.
ZIFA MAKWENZENJANI KE IZIMVU
Njengoba kuthiwa zifa ngamvunye u”NGAMVUNYE” kweqiwe isiqalo egameni “YINYE” kahle hle inkulumo ithi “NGAMVU YINYE”. Izimvu ziyizilwane ezingenamsindo futhi kukholelwa ukuthi azihlakaniphanga ngokwanele kangakokuba uma ngabe zizowela umgwaqo meke eyodwa yawela zonke ke zizowela zilandele le eyodwa azibe zisabheka ukuthi akunamonakalo yini, kanjalo ngisho eziholayo ingangena eweni zonke zingaphoseka ngoba zibuka eyodwa yenza nazo mase ziyalandela.
Lesaga savela kanjalo ke ekutheni mangabe eyodwa iyoziphosa eweni nezinye ziziphosa khona ngenxa yokulandela le esiphosekile, ngenxa yemvu eyodwa ephoseke eweni nalezi ezinye ziyafa ke zifa ngenxa yale eyodwa.
Iningi liyajeza ngenxa yephutha loyedwa.